उद्यमी बन्ने सोच छ? भदौमा हुँदैछ ‘उद्यमी सीड क्याम्प’ :: Setopati
उद्यमी बन्ने सोच छ? भदौमा हुँदैछ ‘उद्यमी सीड क्याम्प’
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, साउन ११
तपाईसँग सीप, योजना, जाँगर र त्यो भन्दा पनि आफैँ उद्यमी बन्ने सपना छ? तर कसरी, कहाँबाट कुन क्षेत्रमा काम थालनी गर्ने भनेर द्वविधामा त पर्नुभएको छैन। यदि पर्नुभएको छ भने स्टार्टअप सम्बन्धी तालीम दिने संघसंस्थाहरु नेपालमा पनि छन्। जसले उद्यमको क्षेत्रदेखि लगानीको स्रोतसम्मको पहिचान गराइदिन सक्छन्।
उद्यमशीलता सम्बन्धी जानकारी दिँदै आएको एक संस्था स्टार्टअप नेपालले त्यस्तै जानकारी दिने ‘उद्यमी सीड क्याम्प’ आयोजना गर्न लागेको छ। अगष्ट २५ देखि ३० सम्म काठमाडौंमा हुने उक्त क्याम्पमा उद्यमी बन्न चाहना राख्नेहरुको आफ्नो व्यावसायिक सोचलाई जिवन्तता प्रदान गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्यसहित शुरु गर्न लागेको उक्त क्याम्पका प्रोजेक्ट लिडर संजय महर्जनले जानकारी दिए।
अगष्ट २० सम्म आवेदन दिइसक्नुपर्ने उक्त क्याम्पमा सहभागी टोलीसँग भएको योजनासँग सरोकार राख्ने सम्बन्धित विज्ञबाट जानकारी दिइने महर्जनले बताए। उनका अनुसार सहभागिहरुको योजनाअनुसारको बजार, कानूनी प्रक्रिया, लगानीको स्रोतको बारेमा जानकारी पाउने छन्।
योजनाले मात्र व्यवसाय सम्भव हुँदैन त्यसको लागि आवश्यक बजारको अध्ययन, लगानी, उत्पादनको उपदेयता जस्ता विषय वा समग्रमा एउटा सपनालाई वास्तविक व्यवसायमा परिणत गर्न आवश्यक सबै प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिइने महर्जनले जानकारी दिए।
प्रविधि संस्करणको यो क्याम्पमा कुनै पनि व्यवसाय प्रविधिसँग जोडिएको भने हुनुपर्ने छ, आफ्नो योजना, सोच र आइडियासहित कम्पनीको वेबसाइटमा गएर आवेदन भर्नुपर्ने छ। त्यसबाट छनौट भएका समूहले पाँचदिनसम्म नियमित छलफलमा सहभागी हुन पाउनेछन्।
बजार, कानून, सरकारी तथा व्यापारको ज्ञान भएका विज्ञसँगको प्रत्यक्ष संवाद र लगानीकर्तासँग पनि अन्तरक्रियाको मौका क्याम्पले दिने छ। यसअघि पनि यस्तै क्याम्प आयोजना गरिसकेको स्टार्टअप नेपालको अप्रिलमा सम्पन्न भएको उक्त क्याम्पमा १२ समूह सहभागी भएका थिए। त्यसमध्ये सातवटा कम्पनी दर्ता भएर संचालनमा आइसकेको र तीनवटाले लगानीसमेत पाएको महर्जनले जानकारी दिए।
उद्यमी बन्ने चाहना बोकेका व्यक्ति तथा समूहलाई रियल कम्पनी र कारोबारसम्मको यात्रा गराउन आफूहरुले सहयोग गर्न यो क्याम्प आयोजना गर्न लागिएको क्याम्पका लिडर महर्जनले जनाए।
२ देखि ४ जना सम्मिलित व्यक्तिहरुको समूह हुनुपर्ने उक्त क्याम्पमा २० वटासम्म समूहले भाग लिन पाउनेछन्। आवेदन दिएकामध्येबाट त्यस्ता समूह छनौट हुनेछन्।
आवेदन दिनको लागि यहाँ जानुपर्ने छ।
के के पाइन्छ सीड क्याम्पमा
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ११, २०७४, ०५:३७:३३